Iqela leYacht yoMlambo iLeaf
Petal, Mississippi, United States
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguScotty
Ukuba ujonge ukubaleka okugqibeleleyo, ungajongi ngaphaya kwe “The Leaf River Yacht Club”. Le khabhathi intle iya kukwenza uzive usekhaya ngokungathi ukwiNtaba eSmoky yaseTennessee. Yakhelwe ngo-2014, eli khaya libonelela ngezimvo eziphefumlayo zoMlambo iLeaf omde, i-1-mayile yesanti, izandi ezingenasiphelo zendalo kunye nokucula kweentaka, kunye noxolo. Ifakwe kwi-1.8 yeemayile ukusuka kumphezulu omnyama, le ndawo yokubaleka ikuvumela ukuba uqhagamshelene nendalo kwaye uphinde unike amandla okugaya imihla ngemihla.
-yonwabele iveranda ebanzi ehamba ubude bendlu kwaye ujonge ibhari yakho yesanti / umlambo
-phumla kwi-veranda ujingi ngelixa upheka isidlo osithandayo kwi-propane BBQ grill
-Zisa ii-ATV zakho kwaye ukhwele kwisanti kunye nendlela yegrabile
-Hlala ujikeleze indawo yomlilo kwaye wakhe i-bonfire entle, efudumeleyo, kunye nepholileyo njengoko usosa iimarshmallows kwaye wonwabele eyona snack yomlilo wenkampu kwi "smores" kunye nokubalisa amabali esiporho phantsi kwenyanga, iinkwenkwezi, kunye nesibhakabhaka esicacileyo.
-Ininzi yokupaka iyafumaneka kuwe kunye neendwendwe zakho
-zisa Jon-isikhephe sakho kwaye uzive ukhululekile ukubamba isidlo sakho okanye intlanzi elunxwemeni
-indawo enkulu yengca ukuze uzise ibhola yakho, iibhodi zemingxuma yombona, okanye nomdlalo webhola webhola webhola welizwe jay
-emva kokuqubha emlanjeni, hlambulula ngeshawa eshushu/ebandayo phantsi kwendlu. Kukho negumbi lokuhlambela phantsi kwendlu.
- Amagumbi okulala ama-2 aneebhedi ezi-2 ukumkanikazi
-ukuze ufumane amava okugqibela enkampu, yonwabele ibhedi yoKumkanikazi kwiveranda ephantsi kwabalandeli
-2 oomatrasi bomoya nazo ziyafumaneka ukuze zisetyenziswe
-6 iikayak ziyafumaneka. Zibeke kwibhulorho yeSims kwaye udada ubuyele kwikhabhinethi emva kosuku olumnandi emlanjeni.
-IiTV ezi-2 zeHD ziyafumaneka ngeTV ethe ngqo ukuze ubukele amaqela ebhola ekhatywayo owathandayo edlala. I-PlayStation kunye ne-Super Nintendo yesikolo esidala ziyafumaneka ukuze zidibanise kwaye zisetyenziswe.
-yonwabele ibha ye-8 yeenyawo / isiqithi njengoko uhleli kwaye udlala amakhadi okanye ukonwabela isidlo sakho sangokuhlwa kwaye utshintshe amabali okuloba okuba ngubani obambe eyona ntlanzi inkulu
Bonisa zonke 63 izinto onokuzisebenzisa
4.93 out of 5 stars from 103 reviews
4.93 · Izimvo eziyi-103
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi103
Ukuhamba ngemizuzu eli-15 kuphela ukusuka kwisixeko sasePetal, esibonelela ngeevenkile zokutyela kunye nokuthenga. Isixeko esikhulu saseHattiesburg simalunga nemizuzu engama-25 yokuqhuba. I-Mississippi Gulf Coast ikwisithuba seyure ukusuka kwindlwana.
Umbuki zindwendwe ngu- Scotty
We are a newlywed couple who loves to play tennis, spend time on the water, cruising on the boat, traveling, exercise, hunt, fish, and of course a relaxing weekend at our cabin we named “The Leaf River Yacht Club”!!
Siyafumaneka ukuze siqinisekise ukuba unamava angcono